Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: gasy ka mifidy | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: gasy ka mifidy
Matetika dia fandeferana hatrany no heno manaraka ny fanehoana ny maha Malagasy, toy ny hoe «Gasy ka miandry», tonga hatrany amin’ny fanambaniana tsy rariny «izy aza Gasy». Na tsy entina anaovana fieboeboana poakaty «gasy ka manja» aza anefa ny maha Malagasy ny tena, dia azo ampiasaina hanandratana ny fanatanterahana adidy.
Angamba rehefa mitombina ny antony dia tsy azo hamaivanina ny dera sy voninahitra, izay ho azon’i Madagasikara raha tody soa aman-tsara ny fifidianana. Loza noho izany no ho an’izay mitady fanakorontanana, na mandritra ny fifidianana na aorian’ny fanambarana ny vokatra. Misy anefa ny ahiahy mikasika ny mety hitrangan’izany.
Ny fanaovana rodobe amin’ny fandehanana mifidy no fomba ahafahan’ny vahoaka misoroka ny fitrangan’ny korontana. Arakaraky ny maha avo ny taham-pahavitrihana no andraisana ny hasina omen’ny mponina ny fifidianana sy ny valim-pifidianana. Sarotra ho an’ny mpandrava laka ny hila kisa amin’ny maro an’isa. Setrin’izay anefa dia mbola sarotra kokoa ny fanakanana ny maro an’isa tsy hirongatra raha toa tsapan’izy ireo fa nofitahana ny vahoaka tamin’ny fanodinkodinana ny valim-pifidianana.
Mirary sy maniry filaminana aorian’ny fanambarana ny vokam-pifidianana ny mponina tsy ankanavaka. Mbola iriany lavitra koa anefa ny haneken’ny rehetra ny safidy ambaran’ny maro an’isa teo am-pifidianana. Rehefa mampiseho faherezana sy firaisankina ny mponina amin’ny faharisihana eo amin’ny fanatanterahana ny andraikitra araky ny maha mpifidy azy, ka na mafana fo aza haneho ny safidiny, dia resy lahatra fa ilaina ny fanajana ny fahalalahan’ny olona tsirairay handatsa-bato ho an’ny olona na hevitra ironan’ny sainy.
Tsy manery ny fandehanana mifidy ny lalàna. Ny fanahy maha olom-pirenena no manao izany ho adidy. Voalaza teo aloha fa ny fanaovana rodobe, izay ho hambaran’ny tarehimarika mitatitra ny taham-pahavitrihana, dia naman’ny antoka mandrara ny fikitikitihana ny vokatra hanadisoana ny marina. Mita be tsy lanin’ny mamba, akanga maro tsy vakin’amboa. Tsy vitan’izay fotsiny anefa, fa samy manana ny maha izy azy. Inona moa no azo hanala tsiny amin’ny filavoana lefona miseho eo amin’ny tsy fandraisana anjara, fandosirana adidy sy famelana ny sasany hanapaka amin’ny anaran’ny tena sy ny maro? Marina fa tsy ny vaton’olon-tokana no hanao ny fifidianana, fa amin’ity indray mitoraka ity, izay tazana fa mifandanjalanja ny hery, dia manan-danja manokana ny safidin’ny tsirairay.